दुधे बालक छाडेर हिडेकी आमासँग २४ बर्षपछि छोराको भेट, गीतको माध्यमबाट यसरी भयो मिलन ! — Hamro Sanchar
दुधे बालक छाडेर हिडेकी आमासँग २४ बर्षपछि छोराको भेट, गीतको माध्यमबाट यसरी भयो मिलन !
प्रेम सुनार प्रकाशित : २०७५/१२/२७ गते
बुटवल, चैत २७- मिलन विछोडको कथा बोकेको कुनै चलचित्रको कथा जस्तै बुटवलमा वषौंअघि छुट्टिएका एक आमा छोराको अचानक भेट भएको छ । त्यो पनि गीत संगितको माध्यमबाट अरू कसैले चिनाएर ।
२४ बर्ष अघि गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्वर–४, चन्द्रकोट गाउँमा ११ महिनाको दुधे बालक दीपक परियारलाई छाडेर बेपत्ता भएकी उनकी आमा कविता परियारको वुटवलमा २४ बर्षपछि भेट भएको हो ।
भेटमा दुबै भावुक भए । दुबैका आँखा रसाए । आमा भन्दै थिईन, मेरो विवसता थियो छोरा… । दिपक भन्दै थिए, मैले त तपाईलाई बिर्सी सकेको थिएँ, मेरी आमा भने कै मेरी फुपु नै ठानेको थिएँ ।